I-Chaga yesifo sikashukela sohlobo 2 isetshenziselwa ukulungisa ama-infusions okwelapha kanye nama-decoctions > Ukwelashwa nokuvimbela
I-Chaga yesifo sikashukela sohlobo 2 isiza ukujwayezela ushukela wegazi. Kepha ulungiselela ama-infusions wezokwelapha, kusetshenziswa kuphela ingaphakathi le-birch mushroom. Amagxolo e-Chaga ayingozi empilweni, kepha ayinawo umthelela ushukela wegazi.
Kuyaqapheleka ukuthi i-birch mushroom iqukethe izinto eziningi ezisebenzayo zokulandela umkhondo: i-iron, potassium, zinc, polysaccharides.
Chaga asisetshenziselwa kuphela ukwelapha isifo sikashukela sohlobo 2. Kuyasiza ukubhekana nezifo zamathumbu, izifo ze-oncological.
Izici zokupholisa ze-birch mushroom
Ungafunda kabanzi nge-chaga amakhowe, izakhiwo zayo ezizuzisayo kanye nokusetshenziswa kwayo ngokumelene nesifo sikashukela sohlobo 2 ngokubuka ividiyo.
Ithuluzi lisheshisa inqubo yokupholisa amanxeba esikhunjeni, kuvame ukuvela kushukela. I-Chaga iyingxenye yemithi yokwandisa ukungasebenzi komzimba. I-Birch fungus ithuthukisa imetabolism emzimbeni, yehlisa umfutho wegazi, yehlise izinga lokushaya kwenhliziyo.
Kubalulekile! Njengoba unesifo sikashukela, awukwazi ukudla i-chaga kuphela, kodwa namakhowe. Bacebile ngamavithamini A no-B.
Ama-redheads anomphumela onenzuzo kumbono wesiguli. Uma isetshenziswa, amathuba we-retinopathy yesifo sikashukela ayancipha.
Ukulungiselela ukukhipha amakhowe e-birch ekhaya
Ukukhishwa kwe-Chaga yesifo sikashukela sohlobo 2 kulungiselelwe kanjena:
Amagremu ayi-10 e-birch amakhowe ahlanganisiwe athelwa ngo-150 ml wamanzi afudumele abilisiwe,
Ingxube ifakwa okungenani izinsuku ezimbili,
Ngemuva kwesikhathi esibekiwe, ukumnika kuyahlungwa.
Umkhiqizo ophumela lapho kufanele uthathwe imizuzu eyi-10 ml ngaphambi kokudla. Isikhathi senkambo yokwelashwa siyahluka kusuka ezinyangeni ezintathu kuya kweziyi-5.
Izindlela zokungenisa ukumelela ezenzelwe Chaga
Kunezindlela zokupheka eziningana zokwenza i-infusions ye-birch mushroom:
Amagremu angama-200 of amakhowe oqoshiwe athululelwa ku-1 litre wamanzi afudumele. Ingxube ifakwa amahora angama-24. Ngemuva kwalokhu, isiphuzo kufanele sikhanyiswe nge-cheesecloth. Kuyadingeka ukuphuza i-100 ml yokumnika izikhathi ezi-3 ngosuku. Impilo yeshalofu yomkhiqizo ayidluli amahora angama-72.
Kuyadingeka ukuthatha amagremu ama-5 we-chamomile ne-chaga. Ingxube ithululelwa ku-400 ml wamanzi abilayo. Umkhiqizo kufanele ungeniswe okungenani amahora angama-4, emva kwalokho isiphuzo sihluziwe. Kunconywa ukuthatha i-50 ml yokumnika kathathu ngosuku.
Ukulungiselela ukumnika okunempilo kusuka ku-chaga, udinga ukuthatha amagremu ayi-10 we-birch mushroom, cinquefoil ne-kelp. Zonke izithako zixubene kahle futhi zigcwele 800 ml wamanzi. Ukushisa koketshezi akufanele kudlule ama-degrees angama-45. Ithuluzi ligcizelelwa okungenani amahora angama-5, bese lihlungwa. Ukuze uthuthukise ukunambitheka, ungangeza uju noma imint ku-infusion. Umuthi uthathwa ngo-100 ml kabili ngosuku. Isikhathi sokulashwa siyizinsuku ezingama-60.
Kubalulekile! Ngokuhlanganiswa kwesifo sikashukela i-mellitus nge-adenoma yesifo sangaphansi, ukumiliselwa kwengcambu ye-burdock kungalungiswa.
Ukuze uyilungiselele, amagremu ayi-10 wezimpande ze-burdock, ogayiwe ku-grater enhle, uthele ama-400 ml wamanzi. Umkhiqizo kumele ubiliswe imizuzu emithathu. Ngemuva kwalokho kufakwa cishe amahora amathathu bese kuhlungwa. Esikhathini isiphuzo esiphelile engeza ama-50 ml wokufakwa kwe-birch mushroom. Udinga ukuthatha u-10 ml wesidakamizwa kathathu ngosuku ngesigamu sehora ngaphambi kokudla. Isikhathi senkambo yokwelashwa singamaviki amathathu.
Ukwelashwa kwe-Chaga-based trophic ulcer
Ezinye iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2 ziba nezilonda ezikhulu emzimbeni. Kunconywa ukuthi kugcotshwe ngamafutha okwelapha ku-chaga:
Ku-5 ml yokungena okulungiselelwe kwangaphambili kwe-chaga engeza u-20 ml wamafutha omnqumo,
Umkhiqizo kumele ufakwe endaweni eyomile evikelwe ukukhanya kwelanga okungenani amahora angama-24.
Amafutha e-Chaga aqeda izinhlungu emilenzeni, asize ukukhipha imithambo yesicabucabu, aqinise imithambo yegazi.
Ukusetshenziswa kwesidakamizwa "Befungin"
Ukwakheka kwalo muthi kuqukethe izinto ezilandelayo:
Ukukhishwa kwamakhowe eBirch,
"I-Befungin" inezindawo zokuhlaziya nezokubuyiselwa komhlaba. Ibuyisela imisebenzi yohlelo lwe-pancreas, ithuthukisa inhlala-kahle yesiguli. Ngaphambi kokusetshenziswa, i-10 ml yesidakamizwa ihlanjululwa ngo-200 ml wamanzi afudumele. Isixazululo sezidakamizwa sithathwa ngo-10 ml kathathu ngosuku. Isikhathi esijwayelekile senkambo yokwelashwa siyizinyanga ezintathu.
Uma kwenzeka imiphumela emibi engadingeki, yeka ukwelashwa bese uthintana nodokotela.
I- "Befungin" ayenqatshelwe ukuthatha ukwanda kokucabanga kwezakhi zayo. Ngesikhathi sokukhulelwa nokondla ngokwemvelo, umuthi uthathwa ngokuqapha.
Contraindication nokusetshenziswa kwe-chaga
Ukwelashwa kwe-Chaga ngesifo sikashukela kuyenqatshelwa komzimba kanye nokuthambekela kokungezwani komzimba. Izimali ezenziwe nge-birch amakhowe akufanele zithathwe kanyekanye ngama-antibhayoriki angowe uchungechunge lwe-penicillin.
Ngokusebenzisa isikhathi eside i-chaga yesifo sikashukela, imiphumela emibi efana nokuqhuma kwe-allergic, irritability, kanye ne-nausea kuyabonakala.
Chaga ekwelapheni isifo sikashukela
Siza Isifo sikashukela i-mellitus sesidlangile kulezi zinsuku kangangokuba sesivele sibalwa phakathi "kwezifo zakulelikhulu leminyaka." Hhayi abantu asebekhulile kuphela, kepha futhi nabantu abasha kakhulu bahlupheka ngakho. Kulesi sifo, ngenxa yokuntuleka kwe-insulin ye-hormone emzimbeni, ukuphazamiseka okuyinkimbinkimbi kwamaprotheni, i-carbohydrate kanye ne-fat metabolism.
Ngezinhlobo ezinzima zesifo sikashukela, konke, ngaphandle kokukhetha, amasistimu nezitho zomzimba womuntu ziyahlupheka. Ukwelashwa, kunqunywa i-insulin ye-hormone, okufanele isiguli siyithathe impilo yonke.
Ukunaka! Isifo sikashukela yisifo esibi kakhulu, futhi ukuzelapha kule ndaba akwemukeleki ngokuphelele! Udokotela ofanelekayo kuphela, udokotela ongakwazi ukuhlola kahle lesi sifo futhi akhethe izindlela zokwelashwa. By the way, udokotela anganikeza izeluleko ezibalulekile ngokusetshenziswa kwomuthi wendabuko, ecabanga ngezimpawu zomuntu ngamunye.
I-chaga izosiza kanjani ngesifo sikashukela
Iminyaka eminingi yokuhlangenwe nakho kwemithi yendabuko, futhi manje idatha efakazelwe ngokwesayensi evela ezifundweni ezikhethekile zomtholampilo, ibonisa ukuthi izidakamizwa ezisuselwa ku-chaga ziyasebenza ekwehliseni amazinga eglucose egazini. Ukwehla kwamazinga kashukela okushukela kubhekwa njengamahora amathathu ngemuva kokudonswa kokulungiswa kwe-chaga, kuyilapho izinga likashukela lehla kakhulu - lisuka ku-15 laya ku-30% ezigulini ezahlukahlukene.
Umuthi owaziwa kakhulu emithini yesintu yokwelashwa okuhlanganisiwe kwesifo sikashukela isiphuzo isiphuzo esivela ku-chaga esilungiselelwe ngokwendlela iresiphi engezansi.
Kulokhu, ingaphakathi kuphela le-chaga elisetshenziselwa ukulungisa umuthi: i-decoction evela emagxolweni ukhunta ayinayo impahla yokwehlisa ushukela wegazi.
Thela ingxenye eyodwa yempahla eluhlaza ebunjiwe engxenyeni ezinhlanu zamanzi, hlanganisa kahle bese uyashisa ukushisa okuphansi kuya emazingeni okushisa angama-50 ° C, ungalethi amathumba. Susa emlilweni bese ugcizelela izinsuku ezimbili, bese ukhipha amanzi (kunconyelwa ukunciphisa i-precipitate kahle nge-cheesecloth).
Uma umkhiqizo ophumayo umkhulu kakhulu, kufanele uvinjiswe ngamanzi afudumele abilisiwe (kuya ivolumu yokuqala). I-infusion igcinwa endaweni epholile, kepha hhayi ngaphezulu kwezinsuku ezintathu. Ngenkambo yokwelashwa, kunconywa ukuthi ulungiselele njalo ikhambi elisha.
Ongakukhetha: izici zokudla kwezifo ze-metabolic. Iziguli ezinesifo sikashukela ziyalulekwa ukuba zinamathele ngokuqinile ezincomeni ezithile ngenxa yokuthi ukudla kwalesi sifo kuyinto ebaluleke kakhulu yokwelashwa.
Esikhundleni semikhiqizo kafulawa ocebile, kufanele usebenzise i-rye, isinkwa samaphrotheyini, noma isinkwa se-wholemeal. Izithelo ezimnandi kufanele zikhawulwe ngobukhulu, esikhundleni sezithelo, yidla imifino emisha. Inyama ivunyelwe ukuncipha kuphela, amanoni kufanele agwenywe.
Kunconywa ukwenqaba ngokuphelele:
izithelo ezimnandi namajikijolo (amagilebhisi, ubhanana, amakhiwane, izinsuku, njll,
inyama enamafutha nenkukhu,
iziphuzo ezinokhilimu noma ezinambithisiwe - zivame ukuqukethe ama-carbohydrate amaningi kunemikhiqizo kafulawa omnandi uqobo.
Amathegi: ushukela, chaga, i-birch mushroom, ushukela
I-Chaga Birch Mushroom Inamandla ahlukile amandla anganikeza umuntu ikhambi lezifo eziningi, kubandakanya nomdlavuza.
Emithini yabantu, inhlonipho ekhethekile kuye. I-pharmacopeia esemthethweni nemithi eRussia naseYurophu Chaga nayo yaziwa njengefungus yokwelapha ukusetshenziswa kwezokwelapha.
Ngenxa yokwakheka kwamakhemikhali acebile, uChaga unezicelo eziningi: njenge-immuno-modulator, antispasmodic, diuretic, choleretic, anti-inflammatory, antiviral, anti-depressant, kanye nomthombo wobunzima bemvelo bamaminerali.
I-Chaga iqukethe ngokwakhiwa kwayo inani elikhulu le-chromogens enemibala egqamile (banika i-decoction kanye ne-infusions yombala omnyama we-Chaga), obonisa umphumela onamandla we-antitumor.
Izici zokupholisa ze-chaga:
• Umphumela wokuqinisa ojwayelekile kuzo zonke izinhlelo zomzimba ezihambisana nomphumela oqinile we-antifungal, anti-bacterial kanye ne-antiseptic wezinto ezisebenzayo zesikhunta, nazo ezinamandla okubulala amagciwane, okulwa nokuvuvukala futhi, ngasikhathi sinye, imiphumela yomzimba emzimbeni womuntu. Isebenza njenge-biostimulants esebenzayo, izinto ezisebenzayo ze-chaga zandisa ukuvikela komzimba futhi zithuthukise ukungazetheki,
• Amandla okuvuselela imetabolism, alawule futhi enze ngokwejwayelekile ukulingana kwe-acid-base emzimbeni womuntu,
• Inomphumela obizwa ngokuthi yi-antitumor, ithuthukisa ukuvuselelwa kwezicubu futhi inciphise ubuthi beziguli ezinomdlavuza. Yandisa ukungasebenzi kwe-antitumor ekuvimbeleni nanjenge-ejenti enezimpawu ekwelapheni umdlavuza okuyinkimbinkimbi,
• Inomphumela oqinisayo ne-tonic futhi iguqula uhlelo lwezinzwa oluphakathi, ikhulisa umsebenzi we-estrogen kanye nomsebenzi we-bioelectric we-cortex yamakhemikhali, ibuyisa izinzwa ezingama-cholinergic
- Ibuyisa izinqubo ze-metabolic ezicutshini zobuchopho ngemuva kokulimala kobuchopho obuhlukumezanayo nemivimbo,
- kudambisa ukucindezeleka kanye nokudangala, ukulwa nokuqwasha,
• Ukuncishiswa kokuntuleka kwezinto ezibalulekile ze-organic nezinto zomkhondo (ikakhulukazi i-potassium ne-magnesium).
• Kuthuthukisa umsebenzi we-hematopoietic, iguqule uhlelo lwe-endocrine, inemiphumela yokulwa nokuguga. Inomthelela ekululameni okuphelele futhi okusheshayo kweziguli ngemuva kokwelashwa ngamakhemikhali kanye nemisebe, ukwelashwa ngezidakamizwa, ukusebenza, ukulimala nokugula okungathi sína,
• Inomphumela omuhle ekusebenzeni kohlelo lokuphefumula kanye nohlelo lwenhliziyo, ikakhulukazi, ukwenziwa kwethonya lokucindezela kwe-arterial and venous.
• Kuthuthukisa uhlelo lokugaya ngokusebenza kwezinqubo ze-enzyme. Inomphumela we-antispasmodic woku cramping we-esophagus, amathumbu, ukuthambekela kokuqunjelwa,
• Yehlisa ushukela wegazi ophakeme ngo-15-30%,
• Umthelela omuhle ezinso, unomphumela wokugaya,
• Uhlanza umzimba ubuthi, ubuthi, izinsimbi ezisindayo kanye nama-radionuclides. Kuthuthukisa inhlala-kahle yeziguli ezinobuthi bokudla, ubuthi obudakayo, isimila noma ukudakwa okutheleleka, ukuthatha inani elikhulu lezidakamizwa,
UChaga uthole ukuthandwa okukhulu ikakhulukazi njenge-ejenti yokuvimbela nokwelapha umdlavuza. Amandla ayo okuvimbela ukukhula kwezimila ezithile kuye kwaziwa amakhulu eminyaka.
Ukwemukelwa kwesikhunta se-birch kuyayeka futhi kuholele ekubuyeni kokukhula kwesimila esibuhlungu, kubuyisela ukungazinzi emzimbeni, kusebenze imisebenzi yokuvikela umzimba futhi ithuthukise ukusebenza kwezidakamizwa zomdlavuza.
Umuthi osemthethweni awunabo ubufakazi bokuthi uselapha ngokuphelele somdlavuza ngosizo lukaChaga, kepha kukhona ubufakazi bokuthi ezindaweni lapho kusetshenziswa khona i-decoction of birch mushroom esikhundleni setiye, azikho iziguli ezinomdlavuza.
Dilitha 2-3 wezipuni zesiraphu ku-100-200 ml wamanzi afudumele (hhayi aphezulu kuno-50 ° C) abilayo noma itiye. Phuza izikhathi ezi-3-4 ngosuku imizuzu engu-15. ngaphambi kokudla.
Inkambo ekwelashweni kwezifo zokwelapha yizinyanga eziyi-1-2.
Ngokuvimbela nasekwelashweni komdlavuza, inkambo iyizinyanga ezingama-5-7 ngamakhefu ezinsuku ezingama-7-10 ngemuva kwezinyanga ezi-1-2 zokwamukelwa.
Lapho wenza izifundo zokuvimbela kanye nezifundo zokwelapha i-Chaga, kungakuhle ukuthi ulondoloze ibhalansi kasawoti wamanzi emzimbeni, okungukuthi: njalo ekuseni, qala ngo-120 ml wamanzi okuphuza ahlanzekile imizuzu engama-20 ukuya kwengama-30 ngaphambi kokudla, uvusa umzimba ngemuva kokulala ebusuku, bese kuthi phakathi nosuku phuza okungenani amalitha ayi-1.5 wamanzi amsulwa (uma kungekho okubhekwayo). Isikhathi sokwelashwa, i-Chaga ngokwezigaba ehlukaniselana nokudla okungenasawoti. Lapho wenza izifundo zokuvimbela kanye nezifundo zokwelapha i-Chaga, kungakuhle ukuthi ulondoloze ibhalansi kasawoti wamanzi emzimbeni, okungukuthi: njalo ekuseni, qala ngo-120 ml wamanzi okuphuza ahlanzekile imizuzu engama-20 ukuya kwengama-30 ngaphambi kokudla, uvusa umzimba ngemuva kokulala ebusuku, bese kuthi phakathi nosuku phuza okungenani amalitha ayi-1.5 wamanzi amsulwa (uma kungekho okubhekwayo). Isikhathi sokwelashwa, i-Chaga ngokwezigaba ehlukaniselana nokudla okungenasawoti.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi ngesikhathi sokwelashwa kukaChaga, kubalulekile ukubona ikakhulukazi ukudla okudla ubisi nokwenqaba inyama, ukudla okusemathinini, inyama ebhemayo, ukosa okunezipayisi nemimoya, hhayi nokusebenzisa kabi ukubhema.
Abantu abaphilile bangasebenzisa i- “Chaga plus” njengesiphuzo esimnandi esiyivikela, esikhundleni setiye nezinye iziphuzo, kuncibilika isipuni esingu-1-3 sesiraphu ku-200 ml wamanzi afudumele. Imvamisa yokwamukelwa ngentando ngentando (izikhathi eziyi-2-4 ngosuku).
I-Chaga (i-birch mushroom) Yehlisa ukuqhuma, inomphumela we-analgesic ezifweni zepheshana lesisu, futhi iyasebenza ezifweni zesibindi. Kuqukethe i-melanin.
I-Propolis ingenye yemikhiqizo ebaluleke kakhulu yezinyosi, i-immunostimulant enamandla, isebenzisa amandla okuphulukisa umzimba, inomphumela onenzuzo ephepheni lesisu, iphule ngokuphelele ikhiphe i-cholesterol "embi" emzimbeni, isuse ubuthi, ivikele amaseli wesibindi, ithuthukise ukuhamba kwegazi kwemisipha kanye nokuhamba kwegazi, ibambezela ukukhula nokukhula kwamagciwane amancane alimazayo. Ine-analgesic eqinile, izakhiwo zokuphilisa futhi isetshenziswe kabanzi kwezokwelapha zendabuko nezendabuko. Ukusetshenziswa kwepropolis kunomthelela ovuselelayo kuzo zonke izinhlelo ezibalulekile nemisebenzi yomzimba, kuqinisa ukusabela kokuzivikela, ukusheshisa imishini yokuvuselela umzimba kanye nokuvuselelwa kwezicubu, kubhubhisa amagciwane, amagciwane, isikhunta, futhi kunomthelela osebenzayo wokulwa nokuvuvukala uma kunezinkinga ngamajoyina, isikhumba nolwelwesi lwama-mucous.
- uhlobo olunzima lwesifo sikashukela
- ukungabekezelelani ngakunye kwezingxenye ezithile zomuthi, ukusabela komzimba,
- udayi kanye ne-colitis,
- Ukusetshenziswa kwe-chaga ngomjovo kanyekanye we-glucose ne-dextrose akwamukeleki,
- kwenqatshelwe ukuthatha i-chaga ngesikhathi sokulashwa kwe-antibiotic